Imodeli esemgangathweni yeCadastre-Geofumadas
NgoJulayi, 2009 cadastre, egeomates My
Leli gama linamaphepha afakwe kwiSithathu ISDE Congress, egcinwe kwiCzech Republic kwi-2003.
Ababhali, yonke i-ITC kunye neSebe leGeodey kwi-University of Technology yaseDelft, yaseNetherlands.
Nangona ikhonkco endibonisayo (ngesiNgesi) inezilungiso ezongezelelweyo.
UPaul Van Der Molen
UPeter Van Oosterom
Olu xwebhu lwenza isindululo sokuba imodeli ye-cadastre inokuba njani, ifuna ukunqanda ukuphindwa kwamanyathelo ngamanyathelo; Ngelixa unxibelelwano lwedatha phakathi kwamasango kungangabi buhlungu kangako ... kulungile kum ngoku ukuba ndisebenza kuxwebhu lwengcinga ye-cadastre. Le modeli iseka uthotho lweenkcukacha ezaziwa ngokuba "yindawo eqhelekileyo" ngaphandle kokunciphisa umda ngokubaluleka kokuba zinokuhlengahlengiswa kwiiyantlukwano ezahlukileyo ezikhoyo kwilizwe ngalinye, ezibandakanya ukwenziwa kweziko, amanqanaba okuchaneka, kunye nobizo lokugqibela.
Olu xwebhu luhle kakhulu, ngumsi omkhulu, sisiphumo sokuphononongwa kweemodeli ezahlukeneyo kumazwe afana neHolland, i-El Salvador, iBolivia, iDenmark, iSweden, iPortugal, iGrisi, i-Australia, iNepal, i-Egypt, i-Iceland, kunye namazwe ali-Afrika kunye nama-Arabhu. . Kwicandelo layo lokwazisa likhankanya amanyathelo ahlukeneyo abophelelayo, kubandakanya i-OGC, INSPIRE, i-EULIS, iMigangatho ye-ISO, iCadastre 2014 kunye nemigangatho ye-FIG.
I-Cadastral Domain Model (CCDM)
Uxwebhu lusebenza kwinqanaba leempawu ze-UML iintlobo ezahlukileyo zezinto, ukuqala kwizinto ezintathu eziphambili manani a cadastre:
Into (Impahla yexabiso)
Ngesokudla (sokunene okanye utshintsho)
Lo ngumgaqo osisiseko wayo nayiphi na i-cadastre, efuna ukugcina ubudlelwane phakathi kwabantu kunye nokuthengiswa kwezindlu kunye nokwaziswa kwangoku ngamalungelo afunyenweyo, nokuba abhalisiwe okanye ayinyani. Ke iiklasi ezizodwa ezineenkcukacha zenzelwe nganye yazo, enemibala ethile ebandakanya:
Iiklasi Zomthetho Nezolawulo
Ukulawulwa kweenguqu zembali
Ke ekugqibeleni bayatshaya intsangu, becinga ukuba zinokuphathwa njani izinto ngemilinganiselo emithathu kunye nendawo esemthethweni. Ngelishwa, ingxelo yaseSpain ayibandakanyi imibala eyahlukeneyo yoxwebhu lwantlandlolo kunye nomgangatho wepikseli wemifanekiso eyoyikekayo, ke ndicebisa ukuba nenguqulo yesiNgesi esesandleni. Umxholo weSpanish uyatsalwa, kwaye awubandakanyi izihloko ezinje ngemizekelo eyakhiwe kwi-gml.
Imodeli ihamba umgama omde, kuba ngaphandle kwenjongo yokuthobela isibhengezo seCadastre 2014 ngokubhekisele ekufeni kwimephu yeemaphu kunye nobomi obude kwimodeli, iyagqitha ngokuthatha ixesha elilinganiselweyo «cadastre» apho izinto ziziza, « ulawulo lomhlaba »nezinto zomhlaba njengeziko.
Inyaniso yokuba imigangatho ye-TC211 ye-OGC (iJometri kunye neTopology) ingenisiwe iyinika ubunzima ngomxholo we-OpenGIS. Kodwa ngokusisiseko ifuthe layo kukuphakamisa ukuba ungayisebenzisa njani imfuno kurhulumente we-e kunye nolwakhiwo lwedatha yendawo usebenzisa ithuba lokudibana kunye netekhnoloji yolwazi.
Uxwebhu olukhulu, ndikucebisa ukuba ulifunde kwaye ulondoloze kwiqoqo yakho ye-geofumadas kuba kungekudala okanye emva koko ungayidinga.
Apha ungayilanda IsiSpanish loMphathiswa wezoQoqosho kunye neMali yaseSpeyin.
Apha ungalanda inguqulo yesiNgesi ye-Eurocadastre, nangona ezinye iinkcukacha ezongezelelweyo zingabonwa kwincwadi ethi "Cadastre 3D kwiimeko zamazwe ngamazwe "
Uxwebhu ekubhekiselwe kulo apha luguqulelo 6, olubizwa ngokuba yiMoscow '06. Luquka izongezo eziphakanyisiweyo kuhlobo 5 ezibandakanya izakhiwo ngaphakathi kweklasi yeRRR kunye neklasi yePartOfParcel icacisiwe ngokwahlukeneyo. Eyokuqala iboniswe ngoSeptemba 2002, kwiinyanga ezintlanu emva kokuba uChrit Lemmen ethe wabandakanyeka kumsitho we-FIG eWashington.
Ngo-2012 i-CCDM yaziwa ngokuba yi-LADM, kwaye ngumgangatho obhalisiweyo we-ISO. I-LADM ithathwa njengendaleko yeCadastre 2014.
Post edlulileyo«Ngaphambilini eCADLite: Enye indlela eya kwi-Microstation
Post Next I-Destination CAD okanye iCAD Resignation?Okulandelayo »
4 Iimpendulo "kwimodeli esemgangathweni yeCadastre"
UJose Guillermo Cardona Matta uthi:
Ndinomdla kwisifundo ukuba ungandithumela ulwazi.
Mna yeku umba erhafelwayo, ngokuba mna ukufumana le khosi Professional unocanda umhlaba City Guatemala, Guatemala, Central America .. Ukuba andikwazi ukuqhubeka ukuthumela iinkcukacha imeyile yam kusoloko nombulelo, ndiyabulela kuwe.
Ukukhuphela ngokupheleleyo, kwikhonkco leziqendu ezibini zokugqibela unqakraza ekunene uze ukhethe «gcina ikhonkco njenge-kwaye uya kuba nalo kwi-pdf.
UJosé López uthi:
Ukubulisa, mhle kakhulu, yenza isikhumbuzo, nceda uthumele ngokugcwele kwi-imeyile yam, siyabonga.